Amanyathelo ama-5 malunga nendlela yokuHlangelwa kwiKholeji
Kubafundi nabazali Ulawulo lwexesha
5 Izinyathelo ezilula ziyakwazi ukunyusa ngeyona nto ininzi yezobuNtu
Ngako konke okufuneka ulungelelanise, ukulungelelaniswa kwikholeji ngamanye amaxesha kungabonakala ngathi kungumsebenzi ongenathemba kwaye ongenamsebenzi. Emva koko, luhlobo luni lomntu onokuyilungisa umyalelo ngaphandle kwezinto ezininzi ?! Kodwa unokumangaliswa kukuba ufunde ukuba kulula kangakanani ukuba ulungelelanise ngexesha lakho esikolweni.
1. Okokuqala nokuphambili, ube nexesha lokulawula ixesha . Ingaba ungumntu ophezulu okanye umfundi wokuqala oneminyaka yokuqala, ixesha liza kuba yinto yakho eyigugu kakhulu.
Kanye nje xa uyidinga kakhulu, kuya kubonakala ngathi yinto encinci. Kwaye uya kunqabile ukuba ukhona, uzive ngathi unayo ngokwaneleyo. Ngenxa yoko, ukuba nexesha elifanelekileyo lolawulo olusetyenziswayo lubalulekile ekuhleleni - nokuhlala ngaloo ndlela - ngexesha lakho esikolweni. Emva kwakho konke, unjani ukuba uyazi ukuba ufanele uyenze ntoni ukuba awuqinisekanga, kakuhle, yintoni omele uyenze?
2. Bhala phantsi zonke iimfanelo zakho zemfundo. Xa uqala ukufumana isi-syllabi yakho ekuqaleni kwe-semester, fumana itafile elineleyo kwivenkile yekhofi, fumana inkomishi yekhofi, kwaye uhlale phantsi nekhalenda yakho. Beka zonke izinto ezikwilwimi yakho kwiikhalenda: xa iiklasi zidibana, xa izinto ezifana nefilimu ezifunekayo kunye neelabhu zicwangcisiwe, xa ziphakathi, xa iiklasi zikhansekisiwe, xa kugqitywa iifom kunye namaphepha. Yaye xa ucinga ukuba unokwenziwa konke ukubeka yonke into, qwa lasele umsebenzi wakho kwaye wenze kwakhona.
Emva kokuba unayo yonke into eyongenisiweyo kwinkqubo yokulawula ixesha, ungaqiniseka ukuba uyazi malunga nazo zonke izabelo zekhosi ezifunekayo phambi komhla wokugqibela. Ngamanye amaxesha, ukwazi nje oko kuhla kwebhoyile kungenza i-90% yombutho wakho ubonakale.
3. Hamba ngento ethile kanye ngeveki. Kuyavakala kungamangalisa, kodwa uya kumangaliswa ngendlela efanelekileyo ngayo lo mgaqo xa kufikelele ekuhlaleni ekholeji.
Ubuncinane ngeveki, hamba uze uququze into ethile. Ingaba yimbumba yakho; ingaba isitatimende sakho sebhanki; ingaba idesksi yakho; ingaba yakho imeyile. Ngokuqinisekileyo, uya kufumana into eyenza ingqondo yakho ibe yintsimi okanye ukuba uye wayenentsingiselo yokufikelela kuyo. Kwaye ukuba awuzange ungene kulo mbandela, mhlawumbi uya kulibala yonke into.
4. Yiba nohlahlo lwabiwo-mali kwaye ukhangele kuyo njalo. Inxalenye ebalulekileyo yokuhlelwa kwikholeji ihlala phezu kweemali zakho. Nangona uninzi lweendleko zakho, njengegumbi kunye nebhodi kwiiholo zokuhlala, zinyamekelwa kwiofisi yoncedo lwezezimali, ukuhlala phezulu kwimeko yakho yemali kusabalulekile. Ukulungelelanisa kuthetha ukuqonda oko kwenzekayo kwiikholeji yakho kwinqanaba elithile ngexesha. Ukuba awuqinisekanga ukuba imali yakho ingakanani kwi-akhawunti yakho okanye, ngakumbi, ukuba unokufumana okwaneleyo ukuyenza nge-semester okanye kwikota-awuyiyo ilungelelaniso. Ngoko qhubeka uhlahlo lwabiwo-mali kwaye uyazi apho imali yakho ihambe khona, apho ikhona, nalapho ihamba khona.
5. Qinisekisa kwaye cwangcise kwangaphambili. Ngaba uyazi ukuba umfana osele ehholo ohlala egxininisa kwaye aqhube umzuzu wokugqibela kwiimviwo? Okanye loo ntombazana ephumayo rhoqo xa ephethe iphepha elifanelekileyo ngenxa yosuku olulandelayo?
Mhlawumbi uza kuba nzima ukuba ufumane umntu oza kuchaza nokuba ngubani "ohleliweyo." Ukuba uyazi ukuba kuza ntoni - iiholide, iziganeko eziphambili, imizuzu, amaphepha, ingxelo zebhu, iimali-unokuzicwangcisa kwangaphambili kwaye ugweme iziganeko ezingadingekile. Yaye ukuba uyazi ukuba kuza ntoni, unokuzicwangcisa ubomi bakho (umz., Ufumane ukulala ngokwaneleyo ) okwaneleyo kusengaphambili ukuba unako ukuzonwabisa ngexesha lobi kakhulu.
Management Time Time 101
7 Iingcebiso zoLawulo lwexesha lokugqibela kweveki
5 Iingxaki zeCwangciso eliPhezulu
Iindlela ezili-10 eziphezulu zokuchitha ixesha kwiKholeji
Funda iziSeko zePlastiki Resin Polypropylene
UkuFunda nokuBhala kweNombolo yeBhanari
Inkcazo ye-Italian Music Command Accelerando